Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » A na-anakwere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ka ha na-akpakọrịta gburugburu Globe
Foto sitere n'aka Jowanna Daley sitere na Pixabay
Dika a na-anakwere otutu umu anumanu n’oge oria ojoo a, a na-atu anya ahia ahuike anumanu uwa iru $79.29 Ijeri na 2028 wee debanye aha CAGR na-aga n’ihu nke 5.9% n’oge amuma, dika akụkọ kacha ọhụrụ nke Akụkọ na Data bipụtara si kwuo. .
Ihe ndị bụ isi na-ebute uto ego n'ahịa zuru ụwa ọnụ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrịa zoonotic dị iche iche na ọrịa na-ebute nri, ịba ụba nyocha na mmemme mmepe na ọgwụ anụmanụ, yana atụmatụ gọọmentị dị mma.
Ahụ ike anụmanụ gụnyere ilekọta anụmanụ site na ịgba ọgwụ mgbochi oge, nyocha ahụike oge niile, na nleta nlekọta ahụike anụmanụ. A na-eji anụmanụ eme ihe n'ọtụtụ ebe maka usoro ọrụ ugbo, ọrụ ugbo anụ ụlọ, na dịka anụ ụlọ n'ofe ụwa ruo ọtụtụ narị afọ. Otú ọ dị, anụmanụ ndị a na-enwekarị ọrịa na ọrịa dị iche iche.
Ndị nwe anụmanụ achọpụtala mkpa ọ dị ịnọgide na-ahụ ahụike anụmanụ site n'ime ule oge niile maka ịchọpụta ọrịa na ọgwụgwọ n'oge. Tinyere nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na nke onwe etinyela uche n'inye ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ka mma, na inye ego ụlọ nyocha nyocha na-arụ ọrụ na ọrịa anụmanụ na ọrịa zoonotic.
Ndị egwuregwu ahịa dị iche iche na-elekwasị anya n'ịmepụta ngwaahịa nlekọta ahụike anụmanụ dị ọnụ ahịa. A na-ekwu na uto ego n'ahịa ụwa n'ihi ihe ndị dị ka ịba ụba nke ịntanetị na e-azụmahịa, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ n'ofe ụwa, na ịrị elu itinye ego na nyocha na ọrụ mmepe.
Agbanyeghị, ụkpụrụ gọọmentị siri ike gbasara nnabata nke ọgwụ anụmanụ na enweghị mmata banyere ahụike anụmanụ, yana ọgwụ nje na ọgwụ nje na-ezighi ezi n'ọtụtụ mba mepere emepe bụ ụfọdụ isi ihe a na-atụ anya na ha ga-emebi uto ahịa ahịa ụwa n'oge amụma.
Ụfọdụ isi ihe dị mkpa na akụkọ a:
N'ime ụdị ngwaahịa a, a na-atụ anya na ngalaba nyocha ga-edebanye aha CAGR ego kacha ngwa ngwa n'ime oge amụma n'ihi mmụba nke ọrịa dị iche iche na anụmanụ, na-abawanye mmefu ahụike anụmanụ, ọnụ ọgụgụ na-abawanye nke ụlọ ọgwụ anụmanụ na ụlọ ọgwụ nwere akụrụngwa na usoro nyocha ọhụụ.
Dabere n'ụdị anụmanụ, a na-atụ anya na akụkụ anụmanụ ibe ga-edebanye aha CAGR ngwa ngwa n'etiti 2021 na 2028 n'ihi ihe ndị dị ka ịba ụba nke anụ ụlọ maka mkpakọrịta n'ofe ụwa, ịkwalite ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, na mmụba banyere ahụike anụ ụlọ na nyocha ahụike oge niile. Na mgbakwunye, ego ọha na nke onwe maka nyocha ọgwụgwọ anụmanụ na atụmatụ gọọmentị iji kwado nlekọta anụ ụlọ n'ụwa niile na-ebute mmụba ego nke akụkụ ahụ.
Dabere na ojiji njedebe, a na-atụ anya na ụlọ ọgwụ anụmanụ na ụlọ ọgwụ ga-aza maka oke ego ha ga-enweta n'oge amụma n'ihi ịkwalite akụrụngwa ahụike anụmanụ, mmụba nke ọrịa na ọrịa dị iche iche na anụmanụ, ọnụ ọgụgụ na-abawanye ule oge niile, yana nnweta kacha ọhụrụ. ọgwụgwọ na ụlọ ọrụ nyocha n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ.
A na-atụ anya na Europe ga-edebanye aha ụtụ ego na-aga n'ihu n'oge amụma n'ihi ihe ndị dị ka ịba ụba nke ụmụ anụmanụ ibe n'ofe mpaghara, oriri dị ukwuu nke ngwaahịa sitere na anụmanụ, na-abawanye ụba nke ọrịa anụmanụ, nnweta nke nchọpụta dị elu na ọrụ ọgwụgwọ.
A na-atụ anya inweta ego ahịa Asia Pacific ga-abawanye na CAGR ngwa ngwa nke 10% n'oge amụma amụma n'ihi mmụba dị ukwuu nke ọrịa zoonotic dị iche iche, na-abawanye nnabata nke anụ ụlọ dị ka nkịta na nwamba n'etiti ndị agadi na ụmụaka, ime obodo ngwa ngwa, na ịba ụba nke mkpofu. ego. Na mgbakwunye, mmụba mmata gbasara ahụike anụ ụlọ na anụmanụ, nyocha na nnwale oge niile, yana nnweta ngwaahịa ahụike anụmanụ kachasị ọhụrụ na akụrụngwa nyocha na-akwalite uto ahịa ahịa Asia Pacific.
Zoetis Inc., Ceva Santé Animale, Merck Animal Health, Vetoquinol SA, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bayer AG, Virbac, Heska, Nutreco NV, Novartis International AG, Elanco Animal Health Inc., Biogenesis Bago SA, Thermo Fisher Scientific, Dectical Pharmaceu Plc., na Tianjin Ringpu Biotechnology Co Ltd. bụ ụfọdụ ụlọ ọrụ dị mkpa na-arụ ọrụ n'ahịa ahụike anụmanụ zuru ụwa ọnụ.
Guzo maka ndị nka nke Ukraine, Udo, nnwere onwe nke ...
Holiday Inn Club Vacations na-ebido ọbịa nke nsọpụrụ...
US Digital Ovulation Test Kits Market na-atụ anya na ọ ga-...
Airline ọhụrụ nke Greek Lumiwings na-eji Turkmenistan B737 mee ihe…